कपाल गाढा, बाक्लो र बलियो हुने नरिवल तेल सजिलै घरमा बनाउने यस्तो छ तरिका – www.agnijwala.com
कपाल को लागी नारियल तेल को लाभ: के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ नारियल तेल संग घर मा केहि प्राकृतिक अवयवहरु को मिश्रण बाट शैम्पू तयार गर्न सक्नुहुन्छ? नारियल तेल संग तयार शैम्पू कपाल को लागी धेरै लाभदायक छ।
कपाल को लागी नरिवल तेल को लाभहरु: सबैजना आफ्नो कपाल कालो, लामो र बाक्लो हुन चाहन्छन् ताकि उनी स्टाइलिश देखिन्छन्, तर यो इच्छा सबैले पूरा गर्दैनन्, केहि मानिसहरु कपाल झर्ने बाट परेशान छन्। कपाल सेतो हुने बारेमा। यदि तपाइँ पनि कुनै यस्तो समस्या बाट परेशान हुनुहुन्छ, तब यो समाचार तपाइँको लागी उपयोगी हुन सक्छ। आज हामी तपाईहरु लाई नारियल तेल को फाइदाहरु लाई लिएर आएका छौं, जस बाट तपाइँ आफ्नो कपाल को विशेष ख्याल राख्न सक्नुहुन्छ। नारियल तेल संग तयार शैम्पू तपाइँको कपाल को लागी नयाँ जीवन दिन सक्छ।
कपाल विशेषज्ञहरुका अनुसार नरिवलको तेल लगाएर कपाललाई पोषण प्राप्त हुन्छ। नयाँ चमक र जीवन आउँछ। कपालको सुख्खापन टाढा जान्छ। कपाल अलपत्र रहन्छ। क्षतिग्रस्त कपाल चाँडै मर्मत गर्न सकिन्छ। यो समाचार मा, हामी तपाइँलाई नारियल तेल संग शैम्पू तयार गर्ने विधि र यो कसरी प्रयोग गर्ने बताइरहनुभएको छ।
कपाल को लागी नारियल तेल संग शैम्पू तयार गर्न को लागी
1. नारियल तेल र मह संग शैम्पू तयार गर्नुहोस्
तपाईं नारियल तेल र मह को मिश्रण गरेर शैम्पू बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाइँलाई १ कप नारियल तेल, १ चम्चा मह, कप एलोभेरा जेल र पानी चाहिन्छ
सबै भन्दा पहिले, मह मा केहि पानी जोड्नुहोस्। यसलाई मिक्स गर्नुहोस् र एलोवेरा जेल, नारियल तेल पनि जोड्नुहोस्।
राम्ररी मिलाउनुहोस् र यसलाई शीशीमा राख्नुहोस् र यसलाई कडा बन्द गर्नुहोस्।
तपाइँ यसलाई फ्रिज मा राख्न सक्नुहुन्छ।
यो प्राकृतिक शैम्पू कपालमा हप्ताको १० मिनेटको लागी छोड्नुहोस् र त्यसपछि कपाललाई पानीले धुनुहोस्।
यो सेतो कपाल को समस्या बाट छुटकारा पाउन र कपाल बलियो हुनेछ।
नारियल दूध र तेल संग शैम्पू बनाउनुहोस् नारियल दूध प्राय धेरै व्यञ्जनहरु मा मानिसहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ। अब यसलाई तपाइँको कपाल मा प्रयोग गर्नुहोस् र एक शैम्पू को रूप मा प्रयोग गर्नुहोस्। नारियल तेल मात्र हैन, यसको दूध पनि कपाल को पोषण को लागी राम्रो मानिन्छ।
तपाइँले २ चम्चा नारियल तेल लिनु पर्छ र १ चम्चा नारियल को दूध संग राम्रो संग मिश्रण गर्नु पर्छ।
अब ग्लिसरीन को केहि थोपा, कुनै हल्का तरल साबुन जोड्नुहोस्।
यसलाई शीशीमा राख्नुहोस्।
जब कपाल मा यो शैम्पू को उपयोग, बोतल राम्रो संग मिश्रण।
यो तपाइँको कपाल कालो र हस्ताक्षर बनाउनेछ।
3. एलोवेरा जेल र नारियल तेल
एलोवेरा जेल र नारियल तेल को साथ एक घर को शैम्पू बनाउन को लागी, आधा कप नारियल तेल लिनुहोस्। एउटै मात्रा मा एलोवेरा जेल लिनुहोस्। तपाइँको मनपर्ने आवश्यक तेल को केहि बूँदहरु जोड्नुहोस्। अब यसलाई बोतलमा राख्नुहोस् र राख्नुहोस्। यसलाई कपालमा लगाउनुहोस्। हप्तामा दुई पटक यसो गरेर, तपाइँ स्वस्थ र घना बास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।